काठमाडौँमा मेलम्ची कहिले ? अनुत्तरित मेलम्ची खानेपानी विकास समिति | Nepal Ghatana
प्रकाशित : ४ श्रावण २०७८, सोमबार १३:०७
मेलम्चीको पानी अब कहिले काठमाडौँ आउँछ ? मेलम्ची खानेपानी विकास समिति आफैँ अनुत्तरित छ ।
असार १ गतेको बाढीपहिरोले आयोजनाका संरचना र पहुँच मार्गमा क्षति पु-याएकाले तत्काल पानी ल्याउन सकिने अवस्था छैन । बाढीले बिगारेको संरचनाका सफाइबाट मेलम्ची आयोजनाको काम सुरु हुनेछ ।
उहाँका अनुसार आयोजनामा करिब दुई अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ तर विस्तृत अध्ययन हुन बाँकी छ ।
आयोजना निर्माण स्थलमा पुग्ने पहुँच मार्ग र पुल बाढीले बगाएकोले सबैभन्दा पहिले पहुँच मार्ग र पुल मर्मत, सुधार, पुनर्निर्माण वा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यो काम वर्षायाममा सम्भव छैन ।
हेडवक्र्स करिब १० मिटर पुरिएको जानकारी समितिलाई दिइएको छ । हेडवक्र्समा करिब तीन लाख घनमिटर गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा थुप्रिएको र त्यसलाई हटाउन करिब ३० करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसअघि अस्थायी ड्याम बनाएर पानी काठमाडौँ पठाइएको थियो । यो अस्थायी ड्याम बाढीले बगाएको छ । तत्काल पानी ल्याउन अर्को अस्थायी ड्याम निर्माण गर्नुपर्छ तर पहिले क्षति भएका संरचना सफा नगर्दासम्म अस्थायी ड्याम बनाउन सकिने अवस्था छैन ।
हेडवक्र्स स्थल पुग्ने सडक नै अवरुद्ध छ ।